Andiana 370 Dragon® Dredge - Dredge Ellicott
Ellicott Dredges dia iray amin'ireo mpanamboatra dredge malaza any Etazonia sy manerantany. Ny dredge an'ny Series 370 Dragon® dia iray amin'ireo sokajy kely indrindra malaza sy mahomby famonosana mikotrika fanoratana ao amin'ny indostria. Ny mpanjifa dia avy amina mpandraharaha vaovao, voalohany amin'ny faritra lavitra eran'izao tontolo izao, amin'ireo mpifaninana ankapobeny, tompona tsy miankina, ary sampandraharaham-panjakana manerana an'i Etazonia.
Ity maodely ity dia matetika ampiasaina amin'ny rindranasa marobe, anisan'izany ny fitrandrahana ny renirano, ny fitrandrahana ny farihy, ny fikojakojana ny marinas sy ny lakandrano fitetezana, ny fikojakojana ny lakandrano, ny fiarovana ny morontsiraka sy ny morontsiraka ary ny famerenana amin'ny laoniny ny honahona sy ny honahona.
Ny famolavolana tsotra dia mahatonga azy io ho dredge mety ho an'ny tompona voalohany.
Ny dredge suction fanapahana henjana sy azo antoka dia manome fotoana fihenam-bidy kely miaraka amin'ny fikojakojana fanao mahazatra.
Rafitra fanaraha-maso, motera ary singa mekanika voafantina mazava hampiasaina amin'ny tontolo an-dranomasina henjana.
Betsaka - ampiasaina amin'ny fitrandrahana fasika, fanovozana rano amin'ny lalan-kely, lakandrano ary marinas.
Hizaha habe: 12 ″ x 10 ″ (300 mm x 250 mm)
Motera mahazatra Caterpillar C.93: 416 HP (310 kW)
Modely telo tokony hofidiana avy amin'ny halalin'ny halalin'ny fandatsahan-drà ilaina: 20 ′ (6 m), 33 ′ (10 m), na 42'-50 '(12.8 m-15.2 m)
Stern jib crane ho an'ny fantsom-panafahana
Fanamafisana ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny aircon
Tariby sy vatofantsika fihantonan-javatra
Misy safidy fanampiny azo alaina amin'ny fangatahana